Kill စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
၁၂ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၄
ဒီတပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ သတ်တယ်လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Kill စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Time to kill, Dressed to kill နဲ့ To kill two birds with one stone တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Time to kill
Time (အချိန်)၊ to kill (သတ်ဖို့) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က သတ်ဖို့အချိန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလူတဦးမှာ ဖြုန်းဖို့အချိန်ရှိတာ၊ အချိန်တွေပိုနေတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Since we have time to kill before the movie, let’s go to the teashop.
ရုပ်ရှင်မပြခင်၊ ကျနော်တို့မှာအချိန်ဖြုန်းဖို့ ရှိနေတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သွားရအောင်ဗျာ။
(၂) Dressed to kill
Dressed က Dress စကားလုံး က ဆင်းသက်လာပြီး၊ dressed က အင်္ကျီဝတ်ထားတာ၊ to kill (သတ်ဖို့) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သတ်ဖို့ အင်္ကျီဝတ်ထားတာပေါ့။ ဒီအသုံးကို ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ကျီဝတ်အလှပြင်ထားတာ ခေတ်စကားအရ အပြတ်မိုက်နေတယ်ဆိုတော့ လူတဖက်သား စွဲမက်ပြီး ကျမတို့မြန်မာစကား မှာ အလှမှာမူးယစ်စေတာ မျိုးနှင့်ဆင်တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ တနည်းတဖက်လူ မူးမေ့သွားမလားခံစားရလောက်အောင် အပျံစားဖက်ရှင်အင်္ကျီတွေဝတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့လိုက်တဲ့လူကလည်း …ဟာ...လှလိုက်တာ၊ ရှိုးထုတ်ထားတာအပြတ်ပါဘဲလို့ပြောစေလာတဲ့ အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ သိပ်ကိုစတိုင်ကျကျ၊ လှလှပပ၊ ရှိုးကျကျ ...ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်ဆင်ထားတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Wow! Look at Sally. She dressed to kill in the latest designer’s clothes.
ဟာ… Sally ကို ကြည့်စမ်းပါဗျာ။ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာအင်္ကျီံတွေဝတ်ထားတာ အပြတ်မိုက်နေတာပဲ။
(၃) To kill two birds with one stone
To Kill (သတ်တာ) ၊ Two (နှစ်)၊ Birds (ငှက်တွေ) ၊Two birds (ငှက်နှစ်ကောင်) ၊ with (နှင့်) ၊ One (တစ်) ၊Stone (ခဲ၊ ကျောက်ခဲ) ၊ One stone (ခဲတစ်လုံး) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်ကို ပစ်သတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ အလုပ်တခုလုပ်ရာမှာ တချိန်တည်း အကျိုးနှစ်ရပ် အောင်မြင်မှုနှစ်ရပ်ကို ခံစားလိုက်ရတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ တစ်ချက်ခုတ်၊ နှစ်ချက်ပြတ်၊ ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းရ စသဖြင့် အသုံးတွေနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Exercise is good foraperson. It’s like killing two birds with one stone. You stay both healthy and trim.
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလူတစ်ဦးအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ဆိုသလိုဘဲ ၊ ကျန်းလည်းကျန်းမာစေတယ်၊ တချိန်တည်းမှာလည်း ပိန်ပိန်ပါးပါးရှိစေတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Kill စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ idioms အသုံးတွေက Time to kill, Dressed to kill နဲ့ To kill two birds with one stone တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Kill စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ